हामीहरु भो’कै यसरी कति दिनसम्म बस्ने ? खानेकुराको सहयोग बाँड्न जाँदा देखियो य’स्तो दृश्य : (भिडियो हे’र्नुहोस्) – Sadhaiko Khabar
हामीहरु भो’कै यसरी कति दिनसम्म बस्ने ? खानेकुराको सहयोग बाँड्न जाँदा देखियो य’स्तो दृश्य : (भिडियो हे’र्नुहोस्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १२, २०७८ समय: १६:५७:०६
काठमाडौं / महा’मारीका कारण लगाइएको निषेधा’ज्ञाका कारण दिनहुँ कमाएर भो’क मे’टाउने विप’न्नहरुको जीवन निकै दु’:खद् छ । सरकारले महा’मारी फै’ल ने क्रम रो’क्न भन्दै निषे’धाज्ञा थपिरहेको छ । तर वि’पन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाउने र त्यसैले भो’क मेटा’उनेहरुका लागि भने प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । जसका कारण उनीहरुको बि’चल्ली भएको छ । विपन्न, सुत्केरी र अना’थहरुको बि’चल्ली भएको हो ।
मजदुरहरुले काम गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरुको चुलो बल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सामाजिक रुपमा लागेका अभियन्ताहरुले सहयोग गर्ने क्रम भने जारी छ । उनीहरुका कारण भो’कै बस्नु परेकाहरुले सड’कमै खान पाएका छन् । धेरै सामाजिक अभियन्ताले घरमा बनाएका खाना सडकमा आएर विप’न्नहरुलाई वितरण गर्ने गरेका हुन् ।
उनीहरुले गरेको सहयोगको खाना खान हजारौंको लाइन लाग्ने गरेका छन् । त्यसरी अरुले दिएको सहयोगको खानेकुरा खान आउनेहरु कतिपय धर’धरी रो’ए को देखिन्छ । साना बालबालिका लिएर आएका महिलाहरुको अवस्था निकै दय’नीय हुन्छ । पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्ने समयमा भो’कै बस्नुपरेका बालबालिकाहरुको अनुहार निकै माया’लाग्दो देखिन्छ । तर उनीहरुका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आ क्रो शित समेत हुने गरेका छन् ।
पोखराका रामराज कार्की ४२ वर्षको उमेरमा महा’मारीमा संक्र’मित भएर नि’ध न भयो । उनको १३ औं तिथिमा पठाएको पैसा र केही खाद्यान्न संचारकर्मी गंगा लामाले वितरण गरेकी हुन् । मनोज कार्की रामराजको दाइले सहयोग पठाएको गंगाले बताएकी छन् ।